Welcome to Aayaha Nolosha » TUKUHU XAASKIISA LAMA GUURSADDO MID LABAAD.
June 8, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Tukuhu waa mid ka mid ah baallaleyda ugu caqliga badan ee Alle Abuuray.
Sida Daraasado lagu caddeeyay waxey leeyihiin laba-Jibbaar maskaxda baallaleyda kale, waana xayawaankii Aadanaha baray sida leysku aaso. Runtii marka aad ogaato hab nololeedkiisa wuxuu aad u shabahaa Aadanaha.
Tukuhu wuxuu leeyahay maxakamado iyo xeer ciqaabeedyo uu ku dabaqo noloshiisa si ay ugu noolaadan nolol xasilan oo aan laheyn xad-gudub, waana xikmad Rabbaaniya oo Alle u abuuray.
Tukayaashu waxey isku guursadaan sida Aadanaha oo kale, waxeyna isugu yimaadaan munaasibad kulmisa labada ehel, waxeyna Aadanaha kaga duwanyihiin yihiin Tukaha Lab wuxuu guursadaa mid keliya oo Dheddig, weligii mid kale lama guursado.
Haddii xaaskiisu ka geeriyooto, dabadeed ma guursado, keliya wuxuu ku noolaadaa xasuusihii xaaskiisa Hore.
Tukaha Lab wuxuu mar labaad guursadaa oo keliya marka ay Xaaskiisu dhali weydo.
Cilmi-baadhis dhawaan natiijadeeda la shaaciyey, ayaa sheegeysa in shimbirka Tukaha uu yahay ka ugu caqliga badan bahda Shimbiriha, isagoo xallin kara dhibaatooyinka.
Waxa daraasadda lagu sheegay in tukuhu leeyahay maskax baaxaddeedu wayntahay una dhaqma sida aadanaha, isl amarkaana awood wuxuu u leeyahay inuu xasuusto wajiga qofkii dhib ugeysta, isla markaana uu yahay xayawaan aan waxba illaabin.
Cilmi baadhistan oo lagu sameeyey dalka Britain ayaa lagu sheegay in tukuhu si fudud u kala sooci karo codadka ban’aadamka.
Daraasaddan oo ay sameysay jaamacadda OXFORD ayaa lagu sheegay in tukuhu sameeyo khiyaano iyo xeelado kala duwan si uu uhelo cunto uu quuto,
iyadoo taana lagu ogaaday kadib markii raashin loogu qariyay weel dhexdiisa markaa kaddib tukuhu soo goostay ul yar si uu ula soo baxo qeyb yar oo hilib ah oo ku jirtay weelka dhexdiisa.
In kasta oo khubarada cilmi-baadhistan samaysay ku doodayaan in garaadka Tukuhu ka sarreeyo Shimbiraha kale, haddana Tukuhu waxa uu ka mid yahay nooleyaasha Dugaagga ah ee Rabbaysmin,
iyada oo ay jiraan shimbiro tiro badan oo bani’aadamka la nool isla markaana looga faa’idaysto adeegyo kala duwan, marka laga yimaado qaar badan oo la manafaacdsado.
Haddaba akhristoow ma isleedahay ragga tukaha ka aqli badan…?.